डा.केसीले ओलीलाई दिए यस्तो चुनौती ! « Himal Post | Online News Revolution
डा.केसीले ओलीलाई दिए यस्तो चुनौती !
प्रकाशित मिति : २०७४, १२ मंसिर १९:३९
जिम्बाब्वेमा हालै दशकौं लामो मुगाबे शासनको अन्त भएको छ । तर मुगाबे जानु र लोकतन्त्र वा विधिको शासन आउनु एउटै कुरा हैन भनेर धेरै विश्लेषकले अहिले त्यहाँको सत्ता परिवर्तनबारे होसियारीपूर्वक टिप्पणी गरिरहेका छन् । त्यो कुरा कुनै एउटा देशमा मात्रै लागु हुने पनि हैन किनकि व्यक्ति फेर्नुभन्दा प्रवृत्ति फेर्नु र तानाशाही शासनको मनपरीतन्त्रको ठाउँमा लोकतान्त्रिक विधि र संस्कार स्थापना गर्नु निकै गाह्रो काम हुने गर्छ ।
जहाँसम्म नागरिकका रूपमा हाम्रो अभियानको कुरा छ, हामी सधैँंभर एकनासले तीन करोड नेपालीको हितमा लडिरहन्छौँ । र, जबसम्म लड्छौं, तबसम्म आफूलाई सही लागेको भूमिकामा सही लागेकै तरिकाले लड्छौं । हामीलाई कसैले बाटो देखाउन जरुरी छैन । हामीले नमागेको परामर्श दिनुभन्दा बरु छोटे राजाहरूले आफ्नो वचन र कर्मबीचको प्रशान्त महासागर जत्रो खाडल कम गरुन् । जुन दिन यो देशको राजनीति वास्तवमै संग्लेर नेताहरू माफिया डन जस्तो नभई आमनागरिकको सेवक बन्नेछन्, हामीले दलीय राजनीतिमा जाने आवश्यकता नै पर्ने छैन ।